မင်းစိန်မိသားစုရဲ့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ပြောပြလာတဲ့ အောင်ခိုင် | Duwun
ငွေကြေးအခက်အခဲရှိတယ်လို့ ဦးအောင်ခိုင်က ပြောပါတယ်။
လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဦးမင်းစိန်ရဲ့ ဈာပန အတွက် အနုပညာလောကသားတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေ အားနည်းနေသေးတယ်လို့ ဦးအောင်ခိုင်က ပြောပါတယ်. လက်ရှိမှာလည်း ဦးမင်းစိန်ရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေ ရုန်းကန်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကိုလည်း ဆက်လက်ပြောပြလာပါသေးတယ်.
ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဦးမင်းစိန်ရဲ့ ဈာမပန နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေ မရှိသေးဘူးလို့ ကိုလူချောအဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးအောင်ခိုင်က ပြောပါတယ်. လက်ရှိမှာတော့ ဈာပနအတွက် ငွေကြေးအခက်အခဲ ဖြစ်နေတယ်လို့ Duwun Media ကနေ ပြောပြလာပါသေးတယ်.
'' အခုချိန်ထိအောင်တော့ ဘယ်သူမှ မဆက်သွယ်သေးပါဘူး. ပရိသတ်တွေ ဆီကပဲ ဆက်သွယ်ကြတာ များတယ်. ဦးမင်းစိန်ဆုံးသွားတာ သေချာလား ဘာကူညီရဦးမလဲဆိုတော့ ဗြောင်ပဲပြောလိုက်ပါတယ် ကိုလူချောအဖွဲ့မှာ ဒီနှစ်အတွက် ရန်ပုံငွေဆိုတာလည်း မရဘူး. ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်နေတာကတော့ မင်းစိန် ရဲ့ အလောင်း မြေကျဖို့အတွက် တစ်နည်းအားဖြင့် သဂြိုဟ်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တာကတော့ ငွေပါပဲ လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်'' လို့ သူကဆိုပါတယ်.
လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝရပ်တည်မှု အခြေအနေတွေကိုလည်း ဦးအောင်ခိုင်က ဆက်လက် ပြောပြလာပါတယ်. လက်ရှိမှာလည်း ဦးမင်းစိန် ရဲ့ ဇနီးနဲ့ သမီးလေးရဲ့ ဘဝ ရုန်းကန်နေရမှု အကြောင်းတွေကိုလည်း Duwun Media ရဲ့ သီးသန့်အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်.
'' ရုပ်ရှင်လောကမှာ ဗီဒီယိုဆိုတာ ပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့ ဦးအောင်ခိုင်တို့က ကြုံရာ ကျပန်းအလုပ်ကို လုပ်ရတယ်. အခုမင်းစိန် ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ ဘာကျန်ခဲ့သလဲဆိုတော့ လက်ငုတ်တောင် မကျန်ခဲ့ဘူး. အခုဆိုရင် သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ သူ့ ကလေးနဲ့ ဘယ်လိုရုန်းကန်ကြမလဲတွေးကြည့်တယ်. သူ့အမျိုးသမီးက လောလောဆယ်မှာ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ ရေလိုက်ပို့ရတဲ့ အနေအထားဖြစ်နေတော့ ဘာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာ ပြောလို့ မရအောင်ကို အခက်အခဲတွေက အများကြီးပါပဲ'' လို့ ဆိုပါတယ်.
လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဦးမင်းစိန် မကွယ်လွန်ခင်မှာ ကိုလူချောအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ တွေကိုလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရင်းနဲ့ ဦးအောင်ခိုင် က ပြောပြလာပါသေးတယ်.
'' ဦးအောင်ခိုင်တို့ ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ စကားတွေပြောနိုင်နေပြီ. အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကတော့ တန်းလန်းပေါ့နော်. ထင်လည်းမထင်ထားဘူး ဦးအောင်ခိုင် တို့ ပြန်လာတော့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲ အစ်ကိုရေ မနက်ဖြန်မှတွေ့မယ် ဘာညာ နှုတ်ဆက်ပြီးမှ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ မနက် ၂ နာရီ ၃၅ လောက်မှာသူ့အမျိုးသမီးက ဖုန်းဝင်လာတယ်. အဲ့ဒီအချိန်မှာ မင်းစိန် ဆုံးသွားပြီ ဆိုတာ သိလိုက်ရတာ'' လို့ ဆက်လက်ဖြေဆိုခဲ့တာပါ.
လူကြမ်း သရုပ်ဆောင် ဦးမင်းစိန် ဟာ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ မနက် ၂ နာရီခွဲက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်. သူ့အတွက်ကိုလည်း အနုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းက သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်. ဦးမင်းစိန်ရဲ့ ဈာပန နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကိုလူချော အဖွဲ့ဝင်တွေက ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်. ဦးမင်းစိန်ရဲ့ ဈာပန ကိုတော့ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ ရေဝေးသုဿာန်မှာ မီးသဂြိုဟ် သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်.